रोग लागेर सुपरहिरो भएका पात्रको कथा, हेर्नुहोस् युट्युबमा :: Setopati
प्रभाकर गौतम काठमाडौं, साउन ८
तपाईं एकैपटक कमेडी–एक्सन–सुपरहिरो फिल्म हेर्दै हुनुहुन्छ। तर तपाईंको सुपरहिरो सूर्यालाई एउटा दुर्लभ रोग लागेको छ। कन्जेनिटल सेन्सिटिभिटी नामको यो रोगले उनलाई कसैले पिट्दा वा काट्दा दुख्दैन। यही रोगका कारण उनी सुपरम्यान जसरी उडेर झिँगा समात्न सक्छन्। घरको छतबाट निस्फिक्री हाम फाल्न पनि सूर्यालाई डर लाग्दैन।
कसैले पिट्दा वा काट्दासमेत फरक नपर्ने रोग लाग्दा केको पिर भन्ने पनि लाग्न सक्छ। तर तथ्यांकले कन्जेनिटल सेन्सिटिभिटी रोग लागेका धेरै मानिस चोटको संवेदशीलता थाहा नपाएर मृत्यु हुने गरेको देखाउँछ। यही डरले सूर्याका अभिभावक आत्तिएका छन्।
सूर्या काखे बालक हुँदै सुनको सिक्री चोर्ने समूहको आक्रमणमा परेर उनकी आमाको निधन भएको हुन्छ। सूर्याका बुबाको छोरा हुर्काउने चुनौतीलाई उनका ससुराले हल गरिदिन्छन्। सूर्याका बाल्यकालमा उनको हजुरबुबाको साथ र माया निर्णायक बन्छ।
दुर्घटनाको डरले बन्द कोठामा धेरै समय बिताउन बाध्य सूर्या हजुरबुबाकै सहयोगमा लुकीलुकी मार्सल-आर्ट सिनेमाहरू हेरेर भुलिन्छन्। उनी मार्सल-आर्ट सिनेमामा यति डुब्छन् कि सहरका सारा सिक्री चोरहरूको सफाया गरेको सपना देख्छन्। उनको यो सपनामा बालसखा सुप्री पनि साथ हुन्छिन्। तर एकदिन सुप्रीका जड्याहा बुबालाई छतबाट खसालिदिएपछि सूर्या र सुप्री टाढिन बाध्य हुन्छन्।
वास्तविक संसारका धेरै कुराबाट टाढा मार्सल-आर्ट सिनेमाको संसारमा बाँचेका सूर्याले कराते मास्टर मणिलाई नभेटी आदर्श गुरु मानेका हुन्छन्। ठूलो भइसकेपछि एकदिन तिनै कराते च्याम्पियन गुरु मणिले सय जनासँग फाइट खेल्ने तालिम दिन लागेको थाहा पाएपछि सूर्या उनलाई पछ्याउन थाल्छन्।
तर कराते मास्टर मणि आफ्नै अपराधी जुम्ल्याहा भाइ जिमीबाट सताइएका हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा गुरुलाई भेटेर सिक्री चोरहरूको सफाया गर्ने फेन्टासी बोकेका सूर्याले आफ्नो सपना कसरी पूरा गर्लान्?
यही क्रममा उनको भेट बाल्यकालीन सँगी सुप्रीसँग पनि हुन्छ। तर सुप्री अर्कै केटासँग बिहे गरेर विदेश जाने तयारीमा हुन्छिन्।
सूर्याको फेन्टासीकी भागीधार सुप्री विदेश जालिन् वा आफ्नै बाल्यकालीन फेन्टासीमा फर्केलिन्? यसपछिका घटनाक्रमले यिनै प्रश्नको जवाफ दिनेछ।
कथामा रोगको सन्दर्भबाहेक नयाँ कुरा खासै नभए पनि फिल्मको प्रस्तुति भने 'जरा हटके' शैलीको छ। वासन बाला यथार्थपरक सिनेमा बनाउने अनुराग कश्यपको संगतमा काम गरेका निर्देशक हुन्। तर 'मर्दको दर्द नही होता'मा यथार्थको विपरीत फेन्टासीको चरम प्रयोग छ।
सूर्या र सुप्रीको बाल्यकालदेखि युवा अवस्थासम्मको चरण समेटिएको फिल्मको कथा दर्शकलाई सूर्याले न्यारेट गर्छन्। शारीरिक दुर्बलता भएका व्यक्तिलाई विशेष शक्ति भएको पात्रका रूपमा प्रस्तुत गरेर फिल्मले अर्को कोणबाट हेर्ने बुझ्ने नजरिया दिएको छ।
कलाकार चयन, पटकथा, संवाद, गीत संगीतदेखि प्राविधिक पक्षसम्ममा मेहनत झल्किने प्रस्तुतिका कारण फिल्म मजेदार लाग्छ। मुख्य कलाकार अभिमन्यु दासानीले निर्वाह गरेको सूर्याको चरित्र हिन्दी सिनेमामा नौलो लाग्छ। फिल्ममा उनको गेटअपदेखि अभिनयसम्मले दर्शकलाई हसाउँछ।
एक्सन दृश्यहरूमा स्लो मोसन अत्यधिक प्रयोग गरिएको फिल्ममा हालैको चर्चित वेब सिरिज 'रे' मा देखिएकी राधिका मदानको एक्सनले पनि मर्दको दर्द नही होतालाई रोचक बनाएको छ। यसबाहेक हजुरबुबा बनेका महेश मांज्रेकर र दोहोरो भूमिकामा देखिएका गुलसन देवइयाको अभिनयले मन जित्छ। खासगरी दाइलाई सताउने जिम्मीको चरित्रमा उनी खुब जमेका छन्।
'हरेक दिमाग हल्लाउने कहानीको पछाडि एकदमै गलत निर्णयको हात हुन्छ' जस्ता वान लाइनरले मन छुन्छ। फिल्ममा पुराना गीत, फिल्मका नामलाई पनि रोचक र अर्थपूर्ण रूपमा प्रयोग गरिएको छ। र्‍यापदेखि पुराना गीतहरू भरपूर प्रयोग भएको फिल्ममा किशोर कुमारको स्वरको 'नखरेवाली' गीतको सन्दर्भ विशेष छ जसले महिलाको नयाँ तर सशक्त इमेजलाई स्थापित गर्छ।
भारतमा व्यवसायिक रूपमा दर्शक तान्न नसके पनि मर्द को दर्द नही होताले समीक्षक र फेस्टिभलहरूमा भने प्रशंसा पाएको थियो।
सन् २०१८ को टोरन्टो इन्टरनेसनल फिल्म फेस्टिभलको म्याडनेस सेक्सनमा प्रिमियर भएको यो फिल्मले पिपुल्स च्वाइस अवार्ड जितेको थियो। भारतको मामी फिल्म फेस्टिभलमा समेत तारिफ बटुलेको यस फिल्मका कलाकारहरूले उत्कृष्ट अभिनयका लागि अवार्डसमेत जितेका छन्।
प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन ९, २०७८, ११:१६:००